Global Voices teny Malagasy » Mpanao Gazety Vehivavy 4 Ao Meksika Mijoro Amin’ny Asany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Janoary 2014 13:59 GMT 1	 · Mpanoratra Andrea Arzaba Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Meksika, Fanabeazana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta
Anisan'ny fitantarana ataonay momba ny miralenta ao Amerika Latina sy ao Karaiba ity lahatsoratra ity izay hiarahana miasa amin'ny NACLA (North American Congress on Latin America  [anglisy]- (Kongresy Amerikana Avaratra mitodika amin'i Amerika Latina).
Na dia eo aza ny karama ambany sy ny loza mihatra amin'ny mpanao gazety ao amin'ny firenena mampidi-doza indrindra hoan'ny mpanao gazety  ao Amerika, mbola manohy miasa sy mavitrika amin'ity asa ity ireo mpanao gazety vehivavy Meksikana sasany.
Mpanao gazety efatra amin'ireo mpanao gazety maherifo no ampahafantarinay anao amin'ity lahatsoratra ity. Ahitana ny fitantaran'izy ireo momba ny fifindra-monina, politika, nofinofy ary ny miralenta, manome topi-maso ho antsika mikasika ny fiainan'izy ireo mba hahafantarana izany hoe vehivavy mpanao gazety ao an-tanànan'i Mexico izany.
Mpanao gazety teraka tao Alemaina i Nicole, nifindra nonina tao an-tanàn-dehiben'i Mexico izy tamin'ny fanohizany ny fianarany ambaratonga ambony. Miasa amin'ny fikambanana tsy miankina izy mandritra ny tontolo andro, ary miasa amin'ny maha-mpanao gazety mahaleo-tena kosa amin'ny alina ka mitantara indrindra momba ny sakafo sy ny fitsangatsanganana. Nanangana ny bilaoginy manokana momba ny fandrahoan-tsakafo ihany koa izy, antsoina hoe “La cocinera con prisa ” [es] (“Mpahandro sakafo maimaika”).
Tamin'izy 12 taona no nitsiry tao aminy ny fitiavana asa fanaovan-gazety: raha namorona gazetiboky niaraka tamin'ny namany izy. Nanazava i Nicole fa mitady sary atao amin'ny gazetiboky ny namany, raha nanoratra tantara-foronina isaky ny sary kosa izy. “Mbola voatahiry aty amiko io gazetiboky io”, hoy izy nilaza am-pireharehana.
Nanazava i Nicole fa nahitàny tombontsoa tahaka ny olon-drehetra i Mexico: “Teraka tao anatin'ny taranaka sy kolontsaina izay tsy hanontaniako intsony raha afaka mifidy, mianatra sy mampihatra ny asako tahaka ny an'ny lehilahy aho. Manam-bitana aho manana fiaviana Alemàna sy Meksikana, ary misokatra sy manohana tanteraka ahy amin'ny asako ny ray aman-dreniko.”
Ho azy, ny olana lehibe amin'ny asa fanaovan-gazety dia ny karama ambany: “Tokony hahafantatra ny olona sasany fa raha mila olona vonona sy matotra ary manana traikefa tsara izy ireo, dia tokony hifandraika amin'izany ny fitondrana azy, ny fandoavana ny karamany amin'ny fotoana mety sy karama araka ny tokony ho izy. Asa mitaky risim-po sy fandavan-tena ny asa fanaovan-gazety, saingy indrisy, tsy dia tsara karama.”
Araho ao amin'ny Twitter i Nicole: @NicMedgenberg 
“Tsy afaka hilaza aho fa mbola tsy niharan'ny fanavakavahana na fomba fandraisana mitanila amin'ny maha-vehivavy ahy. Mino aho fa misy ifandraisany amin'ny fahatsapan-tena amin'ireo zo manokana hananako izany. Tsy avelako hitranga mihitsy izany”, Hoy i Elia namaly ny fanontaniana raha efa niharan'ny fanavakavahana amin'ny maha-mpanao gazety vehivavy azy izy.
Teraka sy lehibe tao Mexico i Elia, ary miasa toy ny mpanao gazety mahaleo-tena. Amin'ny 4 ora sasany sy amin'ny 5 maraina no anombohany ny tontolo androny, manokana atsasakadiny amin'ny famakiam-boky izay mahaliana azy izy (tsy manam-potoana intsony izy avy eo). Avy eo mamaky vaovao sy manomana ny fandaharam-potoanany izy. Efa eo am-panadihadiana olona sy mitady vaovao hotrandrahana izy amin'ny 10 ora maraina. Mifarana amin'ny 10 ora alina ny asany.
Efa ela i Elia no nanonofy ho lasa mpanao gazety. Hitany fa anisan'ny asa mampientanentam-po indrindra manerantany ny asa fanaovan-gazety, mitrandraka izany hatrany amin'ny tany lavitra. Nandritra ny fianarana teny amin'ny lisea, niasa tamin'ny gazetin-tsekoly izy, ary nahazo asa voalohany maha-mpanao gazety teo amin'ny faha-18 taonany.
Amin'ny asany miaraka amin'ny tambajotra Periodistas de a Pie , manoratra lohahevitra momba ny zon'olombelona sy ny miralenta izy : “Maniry foana hanoratra avy amin'ny vinavina momba ny fitovian-jo hoan'ny rehetra aho; tsy dia mifantoka loatra amin'ny maha-lahy sy vavy aho raha tsy hoe misy ny tranga fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy.” Ao amin'ny fikambanana misy azy, nisafidy ny tsy hanoratra ihany momba ny fitarainana izy ireo, fa hikaroka ohatra momba ireo tantara mahomby izay manohitra ny fijaliana mahazatra mihatra amin'ireo lasibatra sy mankahery ireo olom-pirenena amin'ny tantara mahomby (mahafinaritra) avy amin'izy ireo ihany.
Milaza tena ho mpandala ny zon'ny vehivavy izy; na dia tsy maharesy lahatra azy aza ireo teorian'ny feminista, ao anatin'ny fitomboan'ny mahaolona azy sy ny firosoan'ny asa aman-draharahany izany. Ho azy, ny fanamby goavana atrehin'ny mpanao gazety lahy sy vavy ankehitriny ao Meksika dia ny karama ambany sy ny fepetra mifehy ny asa, “izay mananotsarotra hanatontosana fanadihadiana tena izy.”
Araho ao amin'ny Twitter i Elia: @eliabaltazar 
Mpiavy avy ao Toluca, tanàna 40 minitra avy ao Mexico i Sandra ary mpanoratra momba ny mozika sy ny teknlojia ao amin'ny Swagger  [es]. Amin'ny andro tsotra izy dia mpanitsy ny lahatsoratra havoaka ao amin'ny tranonkala. Mamotopototra lohahevitra hatolotra azy ireo ho azo itrandrahana vaovao hoan'ireo mpanao gazety ao amin'ny ekipa misy azy ihany koa izy.
“Tsy dia mankafy loatra mitantara zavatra manafintohina momba ny mozika aho, tantara mikasika an'i Justin Bieber sy Miley Cyrus ohatra, kanefa mahaliana tanteraka an'ireo mpamaky anay izany ka voatery tsy maintsy manoratra momba izany aho”, hoy izy nanazava. Te-hanohy ny asany amin'ny fitantarana fanatanjahan-tena i Sandra. Mpanohana mafana fo ny ekipa mpilalao baolina kitra ao amin'ny faritra, Diablos Rojos izy, saingy fantany fa miandry fotoana ny hidirana indray amin'izany sehatra izany amin'ny maha-vehivavy azy.
Nahita i Sandra fa ny ho lasa mpanao gazety no niriany raha mbola nianatra teny amin'ny lisea . Nilaza izy fa nanoratra foana ho azy manokana, ary tamin'izy 16 taona, nanomboka liana tamin'ny fanoratana hoan'ny hafa izy. Enin-taona mahery izay, mivezivezy isan'andro mankao Toluca sy Mexico izy, ary na dia tsy monina ao andrenivohitra aza izy, dia nilaza fa avy any amin'ny DF (“Distrika Federaly”) ihany ary tsy misy toeran-kafa tiany hanaovany ny asa maha-mpanao gazety azy.
“Ny fanamby lehibe hitako hoan'ireo mpanao gazety ao Mexico dia indraindray adinon'izy ireo fa tokony hahitsy fijery (tsy mitanila) araka izay tratrany izy ireo. Tsy hivoatra ny asa fanaovan-gazety ao Meksika raha mbola mitombo ny fitiavan-tenan'ireo mpanao gazety, hoy izy namarana.
Araho ao amin'ny Twitter i Sandra: @sandiapolinar 
“Miezaka hatrany aho mampitovy lanja izay vaovao soratako. Raha manao fanadihadiana lehilahy efatra aho, miezaka mitady vehivavy mitovy isa amin'izany koa atao fanadihadiana. Tiako hitondra zava-marina ny lahatsoratro amin'izany sehatra izany”, hoy i Daliri nanazava.
Teraka sy lehibe tao Mexico i Daliri, avy amin'ny fianakaviana miasa eo amin'ny sehatry ny “cirque” nandritra ny vanim-potoana maro izy. Izy no mpanao gazety tokana ao amin'ny fianakaviana, ary reharehany izany. Maro ireo tanàna nonenan'i Daliri manodidina an'i Mexico, nanomboka tao San Rafael hatrao La Roma, tao Tabacalera hatrao Buena Vista. Tena mankafy an'i Mexico izy, na dia tsy maintsy mankany amin'ny tanàna hafa aza izy mba hianatra, fantany tsara fa mbola hiverina ao DF izy.
“Vehivavy mankafy manandrana aho amin'ny asako. Te-hanandrana zava-baovao aho, ary mikaroka lohahevitra vaovao hotantaraina, sy feo vaovao hohainoina.” Nanoratra tantara marobe momba ireo mponina indizeny avy ao Atsimon'i Meksika, ao amin'ny fanjakana Chiapas i Sandra.
Ho an'i Daliri, amin'ny fanomezam-pitenenana ny lehilahy sy ny vehivavy mitovy isa no hampiroboroboany ny miralenta. “tsy mpiaro ny zom-behivavy aho, saingy maniry foana hanoratra momba ny vehivavy amin'ny lahatsoratro” hoy izy. Iray amin'ireo lahatsoratra ankafiziny indrindra sy nosoratany vao haingana ny mikasika ny zanakavavin'ireo mpanao politika izay miasa eo amin'ny sehatry ny politika ihany koa, fanadihadiana nataony mba hahafantarana ny “vitsy an'isa ao anatin'ny vitsy an'isa”.
“Misy ny fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy raha resaka asa fanaovan-gazety no resahina. Misy lehilahy sasany mihevitra fa tsy mahavita asa tsara amin'ny maha-mpanao gazety ianao vehivavy, saingy tsy tokony avelanao hanohintohina ny asanao izany. Fohy fisainana ireny olona ireny (lehilahy)” hoy izy nanipika, nofaranany fa ny asa fanaovan-gazety dia tena zavatra ankafiziny ary tsy misy zavatra hafa tiany atao ankoatra izany.
Araho i Daliri ao amin'ny Twitter: @Dal_air 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/09/56579/
 miralenta ao Amerika Latina sy ao Karaiba : https://es.globalvoicesonline.org/2013/11/24/alianza-nacla-global-voices-tratara-genero-y-sexualidad-en-america-latina-y-el-caribe/
 firenena mampidi-doza indrindra hoan'ny mpanao gazety: http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
 Chiapas : http://en.wikipedia.org/wiki/Chiapas